मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को-को बने नयाँ मन्त्री ? — Sanchar Kendra
मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को-को बने नयाँ मन्त्री ?
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बिहीबार मन्त्रिपरिषदमा दुई सदस्य थप गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जम्कट्टेल र नेपाली काँग्रेसबाट नीमा लामालाई समावेश गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले जम्कट्टेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र लामालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीद्वयले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
कार्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले सोही दिन तीन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यस यता पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् विस्तारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता नपाएका कारण अझैसम्म मुख्यमन्त्री पाण्डेले भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुबीच भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउन नसकेको बताइन्छ । भागवण्डाकै लागि प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
हेटौंडाको मतदानस्थलमा संसदहरुबीच मुक्का हानाहान, जनकपुरधाम तनावग्रस्त, अन्य कहाँको अवस्था केछ ?
काठमाडौंमै बिजुली झ्यापझ्याप जान थाल्यो, के भन्छ प्राधिकरण ?
फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कांग्रेसबाट थपिए यी ३ मन्त्री
रहेनन रंगकर्मी प्रचण्ड, उपचार गर्दागर्दै सिभिल अस्पतालमा निधन
काठमाडौं उपत्यकामा भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय, यस्तो छ कारण
यस्तो आयो कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजा, कसको भोट कति ?